जन्म बार अनुसार मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? सात बार मध्ये कुन बार जन्मिएको मानिस धेरै भाग्यमानी हेर्नुस् ! – Khabar Silo
जन्म बार अनुसार मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? सात बार मध्ये कुन बार जन्मिएको मानिस धेरै भाग्यमानी हेर्नुस् !
Posted on November 2, 2020 November 2, 2020 Author khabar silo Comment(0)
मानिसको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । हिन्दु धर्म अनुसार पनि मानिसको जन्म समय, तिथि, बार, स्थान अनुसार उसको ग्रह दशा, भविष्य र भाग्यको निर्धारण हुने बताइन्छ । मानिसको आचरण र भाग्य पनि कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा जन्मबार बाट थाहा पाउन सकिने कुरा ज्योतिष विज्ञानले मान्दछ । यसर्थ जन्म बार अनुसार मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबार१. आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् । यस बार जन्मिएका मानिसका साथी धेरै हुन्छन् ।२. यो बार जन्मिएका मानिस निकै संवेदनशील हुने भएका कारण कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ रहन्छन् ।३. आइतबार जन्मिएका मानिस चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन अथवा वकालतको क्षेत्रमा लागेका हुन्छन् ।४. आइतबार जन्मिएका मानिस सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुन्छन् तर पनि उनीहरु चाडैँ रिसाउने स्वभावका हुन्छन् ।५. आइतबार जम्मिएका मानिस धनवान हुन्छन् ।६. आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन् ।
सोमबार१. सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुको स्मरण शक्ति निकै तेज हुन्छ । उनीहरु मृदुभाषी हुन्छन् तर पनि उनीहरु मुढी स्वभावका हुन्छन् ।२. योबार जन्मिएका मानिस संवेदनशील हुन्छन् तर, चाडै नर्भस पनि हुन्छन् ।३. सोमबार जन्मिएका मानिस पढाईमा तिक्ष्ण हुन्छन् र आफ्नो करियरमा निकै माथि पुग्न सफल हुन्छन् ।४. सोमबार जन्मने महिलाहरु भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रुपमा परिचित हुन्छिन् ।५. सोमबार जन्मेका पुरुषहरु निकै माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् तर अलि लोभी हुने भएका कारण उनीहरुले प्रायजसो आफ्नी श्रीमतीको गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ ।६. यो बार जन्मिएका मानिस सौन्दर्यमा निकै ध्यान दिन्छन् । सुन्दरताले धेरैजसोलाई आकर्षित पनि गरेको हुन्छ ।
मंगलबार १. मंगलबार जन्मेका व्यक्तिहरु निकै बहादुर, स्मार्ट र एक्टिभ हुने गर्दछन् ।२. यी व्यक्तिहरु अरु मानिसहरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन्, उनीहरुको स्वभाव परोपकारी किसिमको हुने गर्दछ ।३. यी व्यक्तिहरु आफ्नो हरेक काम निकै गम्भीरताका साथ गर्ने गर्दछन् ।४. मंगलबार जन्मने व्यक्तिहरु गलत कुराहरु सहन नसक्ने भएका कारण उनीहरुलाई रिस पनि धेरै नै उठ्ने गर्दछ ।५. उनीहरुलाई विलासिताको जीवन बाँच्न मनपर्ने हुँदा यी व्यक्तिहरुसँग निकै धेरै लुगा, गाडी, घरलगायत विलासिताका सबै सामग्रीहरु हुने गर्दछ ।६. यस्ता व्यक्तिहरु इमान्दार हुने गर्दछन् र साँचो कुरा बोल्ने गर्दछन् जसकारण आफ्नो बलबुतामा नै सफलता हासिल गर्ने गर्दछन् ।
बुधबार१. बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरु शान्त, विदुषी र बिजनेश माइन्डका हुने गर्दछन् ।२. यिनीहरु योजनाहरुको कुनै स्थान नभए पनि निकै सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्न चाहन्छन् ।३. यो बार जन्मिएका मानिस सफा र स्वच्छ विचारधाराका मालिक हुन्छन् ।४. बुधबार जन्मिएका मानिस नयाँ–नयाँ कुराहरु जान्न निकै उत्सुक हुन्छन् ।५. यो बार जन्मिएका मानिस सन्तुष्ट स्वभावका हुन्छन् ।६. बुधबार जन्मिएका व्यक्ति विश्वासिला र अरुले दिएका धोका नपचाउने खालका हुन्छन् ।७. सकारात्मक सोच सँगै जीवनमा अघि बढ्ने स्वभाव यो बार जन्मिएका मानिसमा पाइन्छ ।८. हतपत नरिसाउने तर रिसाएमा फर्किन समय लाग्ने स्वभाव यो बार जन्मिएको मानिसमा पाइन्छ ।९. बुधबार जन्मिएका मानिसहरु प्रायः शैक्षिक क्षेत्रमा देखिन्छन् ।
बिहिबार१. बिहिबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र निकै समझदार हुने गर्दछन् ।२. बिहिबार जन्मिएका मानिसहरु आदर्श स्वभावका हुन्छन् ।३.बिहिबार जन्मिएका मानिसहरुमा नेतृत्व गर्ने गुण हुन्छ त्यसकारण आफ्नो क्षेत्रमा काम सक्छन् ।५. यो बार जन्मिएका मानिसहरु मेहनती हुन्छन् ।६. बिहिबार जन्मिएका मानिसका धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र निकै कम हुन्छन् ।७. बिहिबार जन्मेका व्यक्ति आकर्षक र अन्टेन्सन प्रिय हुने भएका कारण धेरैजसो यिनिहरु प्रेम विवाह गर्छन् । उनीहरुको वैवाहिक जीवन सुखमय हुने गर्दछ ।
शुक्रबार१. शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ ।२. यिनीहरु रचनात्मक क्षेत्रमा बढी हुन्छन् ।३. शुक्रबार जन्मिएकाहरुालाई संगीत, फिल्मी क्षेत्र, मिडिया, खेलजस्ता कुराहरुले आकर्षित गर्ने गर्दछ ।४. यिनीहरु मलिन स्वरले बोल्ने र मिठो मुस्कानका धनी हुने गर्दछन् ।६. यिनीहरु आफ्नो सम्बन्धमा निकै सजक हुन्छन् तर कहिलेकाँही यहि सजकता नै सम्बन्धमा भारी पर्ने गर्दछ ।७. शुक्रबार जन्मिएका मानिसको साथी धेरै भएपनि असल साथी कम हुने गर्दछन् ।
८. शुक्रबार जन्मिएकाहरको सम्पक्ति अधिक हुने गरेपनि वचत कम हुन्छ । यिनीहरु खर्चालु स्वभावका हुन्छन् ।
शनिबार१. शनिबार जन्मेका व्यक्ति निकै गम्भीर र जिम्मेवार हुने गर्दछन् । मेधावी, बुद्धिमानी स्वभावका हुन्छन् ।२. यो बार जन्मिएका मानिस हाइ प्रोफाइलका समान मन पराउने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरुको संगत पनि हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिसँग हुने गर्दछ ।३. शनिबार जन्मिएका मानिसहरु काममा निपूर्ण हुन्छन् ।४. शनिबार जन्मिएका मानिसहरु खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरु विलासी जिवन मनपराउने खालका हुन्छन् ।
५. शनिबार जन्मिएका व्यक्तिहरु गित संगितमा बढी रुचि राख्ने हुन्छन् ।
६ . आफ्नो दैनिक काममा निपूर्ण हुने गरेरै होला शनिबार जन्मिएका मानिसहरु अलि जिद्धी स्वभावका हुन्छन् । आफूले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने बिचार राख्दछन् ।७. यिनीहरको वैवाहिक जीवन सुखमय हुन्छ किनभने यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई निकै केयर गर्छन् । शनिबार जन्मिएका मानिस सफल हुन्छन
को थिए भगवान शिवका मातापिता ?
हिन्दु धर्म ग्रन्थमा भगवान शिवलाई महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, आशुतोष, रुद्र, निलकण्ठलगायत विभिन्न नामबाट पुकार्ने गरिन्छ । यतिमात्र होइन उनलाई तन्त्र तथा साधनामा भैरवको नामबाट समेत चिनिन्छ । शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार, भगवान शिव हिन्दू धर्मका प्रमुख देवताहरु मध्ये एक हुन् । तर के तपाईलाई भगवान शिवका मातापिता को थिए भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि […]
यी ७ कुराहरु गोप्य राख्नुहोस्, तपाईको जीवनमा सधै सफल हुन्छ
Posted on May 11, 2020 Author khabar silo
कतिपय कुराहरु हामिले आफ्नो सोचेर अरुलाई आफ्नो कुराहरु खोल्छौ । धेरै जसो कुराहरु अरुलाई खोल्दा पनि त्यसले हानि गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले जीवनमा सदैव गोप्य राख्नुपर्ने केही कुराहरु पनि हुन्छन् । हामीले जीवनमा सधै गोप्य राख्नुपर्ने ७ कुराहरु बारे चर्चा गर्छौ । जुन तपाईको लागी राम्रो पनि हुन्छ ।राख्न नसक्दा मानीसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य […]
Posted on August 9, 2021 Author khabar silo
मानिसको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मवारले निर्धारण गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । हिन्दू धर्म अनुसार पनि मानिसको जन्म समय, तिथि, बार, स्थान अनुसार उसको ग्रह दशा, भविष्य र भाग्यको निर्धारण हुन्छ । मानिसको आचरण र भाग्य पनि कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा जन्मबार बाट थाहा पाउन सकिने कुरा ज्योतिष विज्ञानले मान्दछ । यसर्थ आईतवार […]
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १६२२ कोरोना संक्रमित
उपत्यकाका बासिलाइ भर्खरै आयो अत्यन्तै दु:खद खबर